février 2017 – filazantsaramada
ANDRIAMANITRA MIASA SY MITENY
« Tsy misy mahalala tsara ny Ray, afa tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy. » Matio 11:27 Andriamanitra manala ny voaly manarona. Fanakonana ny zavatra iray ny voaly. Andriamanitra te hiseho amintsika olombelona ka naniraka ny Zanany. Azo lazaina amin’ny teny hafa hoe: nanala ny voaly manarona tsy ahitantsika Azy Andriamanitra. Fa tamin’ny alalan’i […]
Publié parfilazantsaramada février 24, 2017 février 23, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ANDRIAMANITRA MIASA SY MITENY
FJKM Kristy Fiainana Bemasoandro
Fanolorana sertifika ireo mpianatra nahavita ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)” Efa nanaomboka ny taona 2005 ny fiaraha-miasa teo amin’ny FJKM Kristy Fiainana Bemasoandro Itaosy, iandraiketan’Atoa Botofanjely Samuel, Mpitandrina tamin’ny alalan’ny FSMI. Koa ny Alahady 5 Febroary 2017 nandritra ny fotoam-pivavahana no nanolorana ny sertifikan’ireo mpianatra sivy mirahavavy nahavita ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra. Nohararaotin’Atoa Jean […]
Publié parfilazantsaramada février 22, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FJKM Kristy Fiainana Bemasoandro
Famangiana Fiangonana: Chapelle Militaire Ampahibe
“Fa aina hoan’ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Ohabolana 4:22 Amin’ny maha Chapelle Militaire azy dia maro amin’ireo miaramila sy ny vady aman-janany no mivavaka ao. Atoa R. David (Kolonely misotro ronono) izay manana andraikitra lehibe ao amin’ny Fiangonana dia tena resy lahatra tokoa fa laharam-pahamehana ho an’ny Fiangonana ny Fitoriana […]
Publié parfilazantsaramada février 22, 2017 février 22, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Famangiana Fiangonana: Chapelle Militaire Ampahibe
HERIN’ANDRIAMANITRA HO FAMONJENA.
« Ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia fahadalana ho an’izay ho very, fa herin’Andriamanitra kosa amintsika ho vonjena. » I Korintiana 1:18 – Nofoanany ny tenany ka nanaiky Izy ho tonga tahaka antsika ary mbola nanaiky hanetry tena satria nanaiky nombohona tamin’ny hazo fijaliana. – Inona no antony? Mba hitondra ny fahotantsika. Tsy mijanona eo amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada février 17, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur HERIN’ANDRIAMANITRA HO FAMONJENA.
Fonja, Toby FLM Nenilava, Akany Avotra Faradofay Enga anie isika mba hanana Baiboly sy Fihirana atolotra ireo voafonja maro be ka hahafahan’izy ireo mianatra ny Tenin’Andriamanitra. Ny Lehiben’ny Fonja Faradofay dia anisan’ireo niangavy ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ny hanolorana vary ireo voafonja miisa 100 ao an-toerana. Tanteraka soa aman-tsara ny volana Janoary 2017 teo […]
Publié parfilazantsaramada février 15, 2017 février 16, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Programan’asa fanasoavana
« Hatry ny fony hianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro; ary fony hianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko. » Jeremia 1:5 Aza kivy hianao, fa raha mbola tsy noforonina tany ankibo dia efa fantatr’Andriamanitra, fantany ny manjo anao, fantany ny olana rehetra mahazo anao, fantany na dia ny fahorianao aza.Tsy miafina aminy ny […]
Publié parfilazantsaramada février 9, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ANDRIAMANITRA MANAMASINA
Fandefasana Film tamin’ireo ankizy eny Andoharanofotsy
Tao anatin’ny fankalazana ny Krismasy sy ho fitoriana ny Filazantsara tamin’ireo ankizy sahirana eny Andoharanofotsy, toerana fonenan’ny Atoa Louis, Talen’ny Programa eto amin’ny Feon’ny Filazantsara dia nandefa ilay sarimihetsika tantaran’i JESOSY araka ny Filazantsaran’i Lioka tamin’ireo ankizy ireo izy ny volana desambra 2016 lasa teo. Ankizy 79 no tonga nanatrika izany. Hita fa tena nahaliana […]
Publié parfilazantsaramada février 9, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandefasana Film tamin’ireo ankizy eny Andoharanofotsy
FANAMARINANA MANERY HIADY
« Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’I Jesosy Kristy Tompontsika. » Romana 5:1 Nohamarinina tamin’ny finoana isika, finoana an’i Jesosy. Vita fihavanana amin’Andriamanitra Ray. Kanefa fihavanana tsy maintsy arovana, satria misy fahavalo. Ny fahotana no mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. Malahelo Izy rehefa manota isika ary mitarika ny fahatezerany […]
Publié parfilazantsaramada février 3, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANAMARINANA MANERY HIADY
Nonolotra vary ireo ankizy sahirana ao amin’ny Akany Fifampandrosoana Ambodin’Isotry ny Feon’ny Filazantsara (FF) Tsara ny mampahatsiahy fa anisan’ireo mpiara-miasa tamin’ny (FF) ny Akany Fifampandrosoana Ambodin’Isotry tamin’ny alalan’ny fandefasana horonan-tsarimihetsika. Tapaka anefa izany fiaraha-misa izany ny volana Jona 2014 noho ny antony samihafa. Nahatsiaro ireo ankizy sy tanora sahirana beazina ao amin’ny Akany ny FF […]
Publié parfilazantsaramada février 3, 2017 février 3, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Programan’asa Fanasoavana